Qaybta daryeelka carruurta dhicisyada iyo jirrada ee Danderyd waxay daryeelaan carruurta dhalata ee jirran iyo carruurta dhisyada ah. Waxaanu carruurta siinaa daryeel degsdeg ah oo isdabajoog ah qoyskuna kaalin weyn ayey ku leeyihiin muhiimadana waxaanu siinaa sidii ay waalidiintu daryeelka ilmaha qayb ugu noqon la haayeen.
Carruurta u baahan kormeer dheeraad ah ayaa lagu xannaaneeyaa qolalka ilaalada
Markay yaraato baahida uu ilmuhu u qabo daryeel caafimaad wuxuu ilmuhu la degganaankaraa waalidkiis, mid ka mid ah qolalka loogu talalgay goysaska ee qaybta ku yaala..
Hooyooyinka aan hore wax u dhalin marka ilmaha dhiciska ama ilmaha jiran dhalaan ayaa iyagana si toos ah loogu daryeelayaa meesha ilmahooda lagu daryeelayo. Haddii uu ilmuhu u baahan yahay ilaalo caafimaad waxa markaa lagu ilaalinayaa nidaamka ilaalada ee (trådlöst).
Marar badan wakhtiga daryeelku wuu dheeraadaa. Markaa waa muhiim inay waaldiintu awood u yeeshaan. Way fiican tahay in aad ka fikirto in aad cunto cuntooyin isu dheelitiran iyo in aad nasato, iyo inaad sidoo kale waxyar marmarka qaarkood aad ka baxdo isbitaalka si aad hawo u soo qaadato.
Qaybta daryeelka carruurta dhjicisyada iyo jirrad Danderyd 1
Isbitaalka Danderyd waxaad u soo raacaysaa tareenka dhulka hoostiisa mara ee ku socda laynka guduudka ah ee dhinaca Mörby Centrum. Basas badan oo iyaguna ka yimid dhinaca waqooyi ayaa iyaguna istaaga isbitaalka bannaankiisa. Sidoo kale baabuurna waad u soo raacikaraa adiga oo soo maraya waddada E20, laakiin meelaha baarkeerinada ee baabuurta la dhigto ayaa xaddidan, sidaa daraadeed way adkaankartaa in aad hesho meel firaaqo ah oo aad maalintaa baabuurka dhigato.
Su'aalo wax ku ool ah
Isbitaalka Danderyds sjukhus wuxuu leeyahay dhowr meelood oo baabuurka la dhigto. Maalmaha usbuuca dhammaantood baarkeerinada lacag ayaa lagu dhiganayaa waxaana loogu talagalay inuu qofka booqashada ku imanayaa 6 saacadood dhigto iyo dadka jirran qudhoodu marka laga reebo BB iyo waxyaabaha degdega ah (akut).
Isniin – jimce 06:00-22:00, 15kr/tim
Sabti – axad 06:00-22:00, 8kr/tim
Waxa lagu bixinkaraa kaar, app, SMS ama cod. Bogga internetka www.parkster.se waxa jira warbixino si fiican kuu tilmaamaya sidii aad u maarayn lahayd hababka kala duwan ee dhigitaalka ah ee lacagta lagu bixinayo.
Baabuurta korontada ku socda waxa loogu talagalay baarkeerino la cayimay oo ku yaala meel ka baxsan huriga O (hus O). Halkaas ayaa loo ogol yahay in baabuurta korantada ku shaqeeyaa bilaash lagu dhigo ilaa iyo inta uu beytarigu u buuxsamayo, laakiin ugu badnaan waa 4 saacadood.
Irrida laga soo galo (Entré)
Irrida laga soo galo qaybta waa inuu marwalba xiran yahay. Marka meesha laydinku qorayo waxaa laydin siindoonaa lambar (kod) aad ku soo gashaan.
Irrida laga galo meesha barkeerinka (hus P) waxay furan tahay inta u dhaxaysa 06:00-19:00. Irrida weyn ee laga soo galaa waxay furan tahay inta u dhaxaysa 06:00-10:00.
Wakhtiyada kale waxa laga soo geleyaa qaybta qaabilaada degdeg ah (akutmottagningen)
Dharka dibadda loola baxo (ytterkläder)
Qaybta looma oggola dharka dibadda loola baxo. Dharkaas waxa la dhigayaa qolka qoyska ama armaajada albaabada qaybta xaggiisa shishe ee gudaha ku taala.
Waxaanu bixinaa quraac subax kasta inta u dhaxaysa 7:00-10:00. Waxa marwalba la helikaraa bun, shaah iyo shukulaato.
Waxa dhicikarta in alaabo yar oo la qaboojiyo oo dambiil/Salled ku jira oo lagu calaamadiyey qol lambarkiis in lagu rido firinjeerka/talaajadda dadka kawada dhaxaysa. Waxa jira shoolad wax lagu karsan karo iyo mikroo. Ka fikira markaad wixiina ku dhamaysataan nadaafada si ay meeshu ugu ekaato meel qorxoon oo dadka idinka dameeyaan iyaguna u istcimaalikaraan jikkada. Waalidiinta ayaa si wadajir ah uga mas'uul ah meeshaas taas macnaheedu waa idinka ayaa mishiinka weelka dhaqa ku ridaya kana guraya markuu mishiinku dhameeyo, idinka ayaa miisaska iyo kuraasida masaxaya.
Isbitaalka gudidhiisa waxa ku yaala dhowr makhaayadood dukaan joornaalada laga gato iyo farmashiiye. Suuqa Mörby waxa ku yaala dukaamo badan, farmashiiye iyo makhaayado.
Waxa fiican marka telefoonka gacanta lagu hadlayo in lala tago meel ka baxsan meesha ilmaha lagu daryeelayo. Waxaanu rabnaa marka ilmaha lala joogo/loo dhow yahay in aanu telefoonku lahayn cod si aanu ilmaha u dhibin, ka dhig sida marka diyaarada la saaran yahay oo kale. Qoka qoyska loogu talagalay telefoonka waa lagu isticmaali karaa. Telefoonka gacanta waxa loo oggol yahay inuu qofku ilmihiisa ku sawirto. Sida kale guud ahaan sawirku isbitaalka waa ka mamnuuc. Waxa jira wi-fi ay dadka martida ahi isticmaali karaan.
Isbitaalka jaamacadda Karolinska siggaar cabbidu waa ka mamnuuc. Sidaa daraadeed waxa siggaarka lagu cabbikaraa meelaha loogu talagalay ee bannaanka oo keliya.
Waxaanu aad u doonaynaa in aanu idinsiino qaabilaad iyo daryeel wanaagsan sida ugu macquulsan. Waxaanu rabnaa in aanu bixino daryeel caafimaad oo tayo sare iyo himilooyin joogto ah sidii aanu intaa uga sii fiicnaan lahayn. Sidaa daraadeed waxaanu u baahanahay in aanu aragtiyo si joogto ah aanu idiinka helo hadaad tihiin waalidiinta. Sidaa daraadeed marka joogitaankii isbitaalku idiin dhammaanayo waxaanu idinka codsanayaa inaa buuxisaan foom su'aalo ah oo ku saabsan aragtidiina intii aad joogteen qaybta isbitaalka. Waanu jecelnahay in aad dib noogu soo celisaan aragtidiina taas oo daryeelka aanu bixino ka dhigaysa mid ka sii fiicnaanta oo ammaan ah
Si fiican ugu duug alkolo/isbiirte gacmaha, faraha iyo qaybaha hore gacamaha. Waxyar ha qalalaan.
Qaybta waxa ka shaqeeya qof idin kala talinay arrimaha bulshada (kurator), way fiican tahay in aad la hadasho qofkale oo ka baxsan dadka ilmahaaga daryeelaya tooska ah siinaya. Sidoo kale wuxuu la taliyaha arrimaha bulshadu idinka caawinkaraa warbixino ku saabsan lacagta waaldika la siiyo, markuu qofku xannuun ku maqan yahay iyo su'aalo la taaban karo oo wax ku ool ah. Mararka qaarkood way fiican tahay inay walaalaha waaweyn iyo dadka qaraabada ahi la hadlaan la taliyaha arrimaha bulshada (kurator).
Waxaanu sidoo kale idinku casumaynaa wadahadal ku saabsan daaweynta cudurada maskaxda ku dhaca (psykoterapeutisk traumabehandling) sannadka ugu horeeya ilmaha- xitaa markaa ka baxdaan isbitaalka.
Shaqaalaha isbitaalka kiniisadda ayaa marwalba diyaar u ah inay wadahadalo idinla sameeyaan. Haddii aad rabtaan in aad la xiriirtaan waxaad weydiinaysaan shaqaalaha qaybta ka shaqeeya ama waxa idiin gudbinaya telefoonka 08-123 550 00. Haddii aad rabtaan in ilmihiina loo magac bixiyo inta uu daryeelka caafimaad ku jiro waxa idinka caawinaya kiniisada isbitaalka.
Dabaqa 4aad ee guriga N (albaabka weyn ee laga soo galo jaranjarada soconaysa dhinaceeda) waxa ku yaala hal qol oo loogu talagalay xasillonida (tukashada) oo booqashooyinka u furan saacadaha u dhexeeya 07.00-19.00.